5 Qaababka cajiibka ah ee F5 Tornado | Saadaasha Shabakadda
Waxaan jecel nahay duufaannada. Waxaan ku aragnaa iyaga telefishanka dukumentiyo ama wararka, waxaana dooneynaa inaan si toos ah u aragno, laakiin… waxay u muuqataa in hadda aan ku raaxeysan karno kuwa ugu xiisaha badan haddii aan u safreyno Mareykanka.
Laakiin ha ka welwelin. Haddii aadan tagi karin hal sabab ama mid kale, halkan waxaan kaaga tagaynaa fiidiyowyo ah 5 qaababka foosha xun ee F5.
Anaguna, dabcan, waxaan ku bilaabi doonnaa "dhalashada" duufaanka. Dhacdooyinkaani waa natiijada laba hawo oo gebi ahaanba iska soo horjeedda (lakabyada hoose hawadu hawo diiran ayey yeelan doontaa, halka lakabyada kore ay qabow noqon doonaan), taas oo keeneysa in qulqulka hawadu u wareegaan koror xagga sare ah, sidaasna ay ku dhalato khaldan. Fiidiyowgan Brad Hannon waxaad ku arki kartaa, waqti-lumis, sida supercell loo sameeyo, "ku abtirsiga" - haddii aan idhaahdo - dhacdadan. Si fudud waa wax laga naxo. Waxaa la duubay bishii Juun 3, 2003, Booker (Texas).
Miyaad u maleyneysaa haddii aan wax yar isku soo dhowaanno?
Raggaan ka tirsan taxanaha Discovery-ka caanka ah ee Stormcatchers aad ayey isugu soo dhowaadeen. Runtii runtii, in yar oo kale ayaa gudaha u gala, macno ahaan. Dabayluhu waxay dhacayeen in ka badan 220km / saacaddii. Fiidiyowgaan waxaa laga duubay Juun 17, 2009, Aurora (Mareykanka).
Haddana, waxaan ku tuurayaa su'aal, maxaad samayn lahayd haddii duufaan soo socoto?
Hagaag, falcelinta caadiga ah waxay noqoneysaa inaad u baxdo lugaha, laakiin haddii aad waxyaalahan ka hesho, waa inaad taas ogaataa waa inaadan ka agdhaweyn 2km. Fogaanta intaas ka yar ayaa noloshaada gelin karta khatar daran. Weli, qoraaga fiidiyowga, Jeff Lechus, iyo saaxiibbadiis waxay duubeen duufaankan cajiibka ah May 20, 2013, Moore, Oklahoma.
Waxay sidoo kale aad isugu dhowaadeen:
Waxaad maqlaysaa ninka oo leh "ilaahayow", "ilaahoow". Guri bay liqday.
Oo waxaan ku dhamaynaynaa muuqaal cajiib ah, halkaas oo aad ka arki karto sameysashada duufaan laga bilaabo markay bilaabato inay ka baxdo supercell ilaa ay taabato dhulka ugu dambayntiina ay milmaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » 5 qaababka foosha xun ee F5
Isbedelka Cimilada iyo El Niño ayaa gaajoon doonta 10 milyan oo qof